Latest RFA News!
79. Aung San Suu Kyi Tells Ethnic Armies More Talks Needed to Advance Myanmar Peace Process	-RFA
#aung san suu kyi	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ She urges militias that have signed the government’s cease-fire accord to discussion outside of formal conference settings.
☞ အခြား English ဘာသာ သတင်းများ ဖတ်ရန်...
78. ကျန်ရှိနေတဲ့ အချက် ၄ ချက်ကို UPDJC မှာ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေရ	-RFA
#updjc	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ ၂၁ ရာစု တတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံမှာ သဘောတူညီမှု မရသေးတဲ့ အချက် ၄ ချက်ကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေရတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
77. တိုင်ကြားခံရတဲ့ အိမ်မဲ ကိုယ်စားလှယ် ခံဝန်လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်	-RFA
76. ကမ်းပါးယံ ပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးအထိ ရှိလာ	-RFA
#pharkant landslide	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအုပ်စု ဆန်ခါရွာအနီးက မဟာ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်ထဲမှာ မနေ့က တောင်ကမ်းပါးယံပြိုလို့ သေဆုံးသူ ဒီနေ့အထိ စုစုပေါင်း ၁၇ ဦး ရှိပြီး ဆေးရုံရောက်ရှိနေသူ ၃၉ ဦး ရှိတယ်လို့ ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
75. ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော်ကို အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့နေရာချ	-RFA
#ပြည်တွင်း	(14h ago)
74. မှားယွင်းပြစ်ဒဏ် ကျခံနေရတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံ တင်ပြမှုတွေ ရှိ	-RFA
#ပြည်တွင်း	(15h ago)
73. အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ လူငယ်တွေ စာပေစကားဝိုင်း ကျင်းပမည်	-RFA
#dassk youth talk	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ လူငယ်တွေ စာပေစကားဝိုင်းကို လာမယ့် သြဂုတ်လအတွင်း မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
72. တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးနေရသူ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်ရှိ	-RFA
#shan refugees	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ဟမ်းငိုင်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ ဟိုခဲကျေးရွာအုပ်စုတဝိုက်မှာ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ RCSS/SSA တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့လောက်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံတစ်ထောင်ဝန်းကျင် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။
71. မြေပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၁ဝ ဦးကျော် သေဆုံး	-RFA
#pharkant landslide	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအုပ်စု ဆန်ခါရွာအနီးက မဟာ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်မှာ ဒီကနေ့ နေ့လယ်က မြေပြိုကျလို့ လူ ၁ဝ ယောက်ကျော် သေဆုံးပြီး အနည်းဆုံး ၈ ယောက်လောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေက ပြောပါတယ်။
70. ဝ အဖွဲ့ တင်ပြချက်အပေါ် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ ဦးဇော်ဌေး ပြော	-RFA
#uwsa	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ NCA စာချုပ်ပါ အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ခွင့်နဲ့ သဘောမကျရင် နုတ်ထွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က စာနဲ့ ကတိပေးနိုင်ရင် NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ UWSA ဝ အဖွဲ့က တင်ပြထားတဲ့အပေါ် နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း သွားမယ်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
69. NCA ကို ရှောင်လွှဲမရနိုင်ဟု တရုတ်ကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား	-RFA
#21panglong	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို တတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံကို တက်ရောက်လာအောင် တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ NCA စာချုပ်ကို ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်လို့ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဆွန်ကိုရှန်းက မနေ့က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
68. အမုန်းတရား ပြန့်ပွားမှု တားဆီးရေး ဖေ့စ်ဘွတ် ကြိုးပမ်း	-RFA
#hate speech	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုမီဒီယာကို အသုံးပြုပြီး အမုန်းတရားနဲ့ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာတွေကို တားဆီးရေးအတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကုမ္ပဏီ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
67. စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာရင်ဆိုင်နေရဟု IOM အရာရှိ ပြောကြား	-RFA
#william lacy swing	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မတူတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကို အတူနေထိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးရှိပြီး အကူအညီတွေ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းသူများ အဖွဲ့ IOM ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် William Lacy Swing က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
66. ငါးမင်းဆွေကို အကြည်ညိုပျက်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီး	-RFA
#ngarr minswe	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ အစိုးရကို ဝေဖန်သူ ငါးမင်းဆွေ ကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းတရပ်မှာ ရေးပါတယ်။ သူ့ကို ဖမ်းထားတဲ့ ပုဒ်မဟာ အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ ချနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
65. Aung San Suu Kyi, Military Chief Discuss Peace Process With Ethnic Armies	-RFA
#panglong conference	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ Militias based along the China-Myanmar border have yet to decide whether they will sign the government’s nationwide cease-fire pact.
64. ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသူ ၃၁ ဦးကို မြန်မာအစိုးရ လက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်	-RFA
#us visa	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသူ ၃၁ ဦးကို ပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စ မြန်မာအစိုးရဘက်က လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
63. ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ မကြာခဏ တွေ့ဆုံမည်	-RFA
#nca unsign orgs	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့နဲ့ မကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ် လို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဌ က ပြောပါတယ်။
62. ကြည်လင်းနဲ့ အတူမရှိကြောင်း အောင်ဝင်းဇော် ငြင်းဆို	-RFA
#aung win zaw	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ လုပ်ကြံသူ ကြည်လင်းနဲ့ စကားပြောဆိုတာ မရှိခဲ့ကြောင်း အောင်ဝင်းဇော်က ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
61. တနိုင်း-လီဒိုလမ်းပေါ်က တောင်သူ တစ်ထောင်ခန့် စိုက်စရိတ်ချေးငွေမရရှိ	-RFA
#farmers loan	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်း-လီဒိုလမ်းပေါ်က ဖားကန့်မြို့နယ်မှာပါတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ၅ ခုက ပုံစံ ၇ မရှိတဲ့ တောင်သူ ခန့်မှန်း အယောက် ၁ ထောင်လောက်ဟာ ဒီနှစ်မိုးရာသီအတွက် စိုက်ပျိုး စရိတ်ချေးငွေ မရရှိတာကြောင့် အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
60. ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စ ပြည်သူသဘောထား ကောက်ယူ	-RFA
#bogyoke statue	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ် တည်ဆောက်ဖို့ သင့် မသင့်ကို ကရင်နီပြည်လူငယ်ထုအဖွဲ့က ပြည်သူ့သဘောထားတွေ စတင်ကောက်ယူနေပါတယ်။
59. သိမ်းဆည်းခံမြေတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့ တောင်သူတွေ ဆန္ဒပြ	-RFA
#pyay farmers	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့နယ်မှာ နဝဒေးသကြားစက်နဲ့ ရဲတပ်ရင်း အမှတ် (၁၀)က သိမ်းယူခဲ့တဲ့ လယ်မြေဧက ၂၀၀ ကျော်ကို မူလတောင်သူတွေထံ တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော် က ဒီနေ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။
58. မြိုင်ကြီးငူ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရိက္ခာပြတ်လပ်	-RFA
#karen refugees	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၅၅၀၀ ကျော် ခိုလှုံနေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသက ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေပြီလို့ စခန်းတာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။
57. အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့ တွေ့ဆုံ	-RFA
#nca sign orgs	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရေးကိစ္စတွေကို အကောင်အထည်ဖော် ရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ က ခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ PNLO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ က ပြောပါတယ်။
56. တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၆ ခုမှာ မိုးကြီးနိုင်	-RFA
#weather	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် ၆ ခုမှာ နောက် ၃ ရက်အထိ မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
55. တူရကီ သမ္မတဇနီး ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်း ရှင်းလင်း	-RFA
#rohingya	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဘယ်ဂျီရန်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ ဇူလိုင်လ ၁၁ နဲ့ ၁၂ ရက်နေ့များမှာ ကျင်းပတဲ့ NATO ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို လိုက်ပါသွားတဲ့ တူရကီသမ္မတကတော် Emine Erdogan က ပြင်သစ်သမ္မတ ကတော်ကို ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ အစ္စတန်ဘူ ကလာတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
54. ၁၃ နှစ်အရွယ်ကို အိမ်ဖော်အဖြစ် ခိုင်းစေမှု စင်္ကာပူ ဒဏ်ရိုက်	-RFA
#maids	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံက ၁၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်ကို မနှစ်က ဇူလိုင်လက အိမ်ဖော်အဖြစ်နဲ့ အလုပ်ရှာပေးခဲ့တဲ့ စင်္ကာပူ အေဂျင်စီ ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကို စင်္ကာပူတရားရုံးက စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ ဒဏ်ချလိုက်သလို အေဂျင်စီလိုင်စင်ကိုလည်း ယာယီပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
53. ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကုလ အဖွဲ့တွေ စေလွှတ်မည်	-RFA
#muslim resettlement	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် UNDP က ပြင်ဆင်နေကြောင်း ကြာသပတေးနေ့ မနေ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
52. မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး တရုတ်ပြည် ပါဝင်လှုပ်ရှား	-RFA
#21panglong	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလက်နက်အဖွဲ့တွေအကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဂျပန်နစ်ကေး သတင်းဌာနက ကြာသပတေးနေ့ မနေ့က ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
51. စီးပွားရေးမူဝါဒ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဖို့ ဆွေးနွေး	-RFA
#world bank	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အရာရှိတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဒီနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
50. နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှုတားဆီးဖို့ မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သဘောတူ	-RFA
#bangladesh	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှုတွေ တားဆီး ကာကွယ်ဖို့၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေ ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ နှစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေ ဒီနေ့ သဘောတူညီလိုက်ပါတယ်။